တာရာမင်းဝေရဲ့အတိုဆုံးဝတ္ထုလေးတွေ | ဥက္ကာကိုကို
တာရာမင်းဝေရဲ့အတိုဆုံးဝတ္ထုလေးတွေ	Posted by oakkarkoko on October 19, 2008
Posted in: ရသစာစုလေးများ.	Tagged: ရသ.	Leaveacomment
ကဗျာဆရာက ထိုမေးခွန်းကို နာပုံမရချေ။
ရုပ်။ ။ ငါ မင်းနဲ့မလိုက်ချင်တော့ဘူး ၊ ငါ့ဘာသာငါရပ်တည်မယ်…တို့လမ်းခွဲကြစို့…။
စိတ်။ ။ အေးလေ…အဲဒီကိစ္စကို ငါတို့အေးအေးဆေးဆေးဆွေးနွေးသွားကြတာပေါ့ ၊ လာ…။
ထိုသို့ဖြင့် ရုပ်သည် စိတ်နောက် ပါသွားရပြန်သည်။ ။
အောက်လမ်းဆရာကြီးက ရင်ဘတ်ကိုတ၀ုန်းဝုန်း ထုကာဂုဏ်ယူကြွေးကြော်၍ မြူးတူးနေသည်။ သူအတင်းနှိုးသဖြင့် အိပ်ပျော်ရာမှလန့်နိုးလာသော ကျားကြီးက စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့် ငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်နေလေသည်။
ကျဆင်းသူများ (ကျတာတော့ ကျမှာပေါ့ဗျာ…လူဆိုတာ နိမ့်ကျတတ်တဲ့အခါလဲရှိတာပဲ…) (ဟုတ်တယ်…လိုအပ်ရင်တမင်တောင် ခုန်ချရသေးတယ် )
(ဒါပေမယ့် အကျကောင်းဖို့တော့လိုတာပေါ့ဗျာ…) (အင်းလေ…ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်………)
ခြေကျိုးများ၏စကားဝိုင်းလေး တိတ်ဆိတ်သွားလေသည်။ ဆိတ်ငြိမ်သူ လူ ။ ။ ခင်ဗျားက တော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့ သတ္တ၀ါကြီးပါလား…။
ကောင်းကင် ။ ။ — – – – — – – – – – – – – – – – – – –
(ဖြေသံမကြားရချေ) (ဆရာ့ရဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးတွေပါ။ ကျွန်တော်တူးဖော်ခဲ့သောမြေစိုင်မြေခဲများအကြောင်း(၁) စာအုပ်ထဲကပါ။
ရသတစ်ခုခုတော့ပေးစွမ်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ ။ )
← မြက်ရိုင်းတောထဲမြင်းရိုင်းတွေ	တားမြစ်ချက် →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...